1 दिन लगाएर पुगियो गाइजात्रा भनेर भाइरल भएका दाईको घर । बुँडा बुँडि छोरा मिडियामा।ram bahadur khatri | Public 24Khabar
Home What's Hot 1 दिन लगाएर पुगियो गाइजात्रा भनेर भाइरल भएका दाईको घर । बुँडा...
1 दिन लगाएर पुगियो गाइजात्रा भनेर भाइरल भएका दाईको घर । बुँडा बुँडि छोरा मिडियामा।ram bahadur khatri
1 दिन लगाएर पुगियो गाइजात्रा भनेर भाइरल भएका दाईको घर । बुँडा बुँडि छोरा मिडियामा। ram bahadur khatri
केही दिन देखि अनलाईन कक्षा बन्द गरेका निजी विद्यालयको अनलाईन कक्षा विहिवार देखि फेरी सुरु हुने भएको छ । अभिभावकसंग वैशाख महिना देखिको विद्यालय शुल्क माग गरेको प्याप्सन र एन प्याप्सनलाई सरकारले शुल्क नउठाउनु भनेपछि कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । बुधबार बसेको प्याब्सन, एन प्याप्सन, अभिभावक महासंघ, इस्टुलगायत संस्थाको संयुक्त बैठकले विहिवार देखि कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
Previous articleनेपाल आएको ३ दिनमै मृ*-त्युु, ११ लाख ऋण तीर्न नसक्दा घरको वी*जोग,
Next articleरिसायो नारायणी ! सबै बगायो के भयो यस्तो ? आजको नयाँ भिडियो हेर्नुस् Narayani River Live Video